mihitsy iny kaominina iny sy ny distrika iray manontolo raha tsy mivaha ny tsy fandriampahalemana, hoy ny ben’ny tanàna vaovao ao an-toerana, Adjad Ridji Razafindrazanaka. Io no mila vahana voalohany. Mbola misy mponina mandry tsy lavo loha ao Betroka na dia efa mandray andraikitra aza ny fitondram-panjakana sy ny OMC ao an-toerana. Tsy voafehy ny fiarahamonina ifotony, izany hoe, misy fiarahamonina kely dia kely fa miitatra mahatonga fakana takalon’aina, halatr’omby, valifaty na “reglement de compte”. Kaominina ambanivohitra mifanila antsoina hoe Ianabiana izao nodoran’ny dahalo ny tanàna iray manontolo. Fifamaliana kely fotsiny anefa dia 40 lahy no tonga nandoro tanàna. 50 tafo mahery no nodoran’izy ireo rehefa manafika ary alainy daholo na sakafo na akoho na omby. Fiarahamonina simba sy tsy voalamin’ireo sefo fokontany na ben’ny tanàna miampy ny fisian’ny kolikoly no mahatonga ilay tsy fandriampahalemana. Mila imasoana voalohany ny ady amin’ny kolikoly sy fandrindram-piarahamonina, noho izany, hoy hatrany ny fanazavany.